Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog - Page2of 26 -
Min Thuta | Knowledge | December 22, 2019
မနက်ခင်းတိုင်မှာ အိပ်ရေးမဝ စိတ်မကြည်တာစတာမျိုးတွေ ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ ဒီအချက်တွေကို လိုက်နာကြည့်ပါ။
Min Thuta | Knowledge | December 21, 2019
မကြာခင် 2019 ကုန်ဆုံးပြီး 2020 နှစ်သစ်ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ Lifestyle ကိုထိခိုက်စေမဲ့အမူအကျင့်ဆိုးတွေကို နှစ်ဟောင်းမှာထားခဲ့ ဖို့လိုပါပြီ။ အဲ့ဒါတွေကတော့…
Min Thuta | Health, Knowledge | December 15, 2019
ဆားဝက်ခြံဆိုတာ မျက်နှာမှာရှိတဲ့ချွေးပေါက်တွေကျယ်နေတဲ့အပေါ် ဖုန်မှုန့်၊ မိတ်ကပ်နဲ့ အခြားအမှုန်အမွှား တွေ ဝင်ရာက ဖြစ်တာပါ။ ဒါမျိုး အမည်းစက်တွေ မိမိမျက်နှာမှာ အထူးသဖြင့် နှာခေါင်းတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဆား ဝက်ခြံတွေကို မှန်ထဲမှာမြင်ရတဲ့အခါအလွန်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းပီး ကြည့်ရဆိုးပါတယ်။ ကဲဆားဝက်ခြံတွေ ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတဲ့အိမ်တွင်းနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ဖယ်ရှားကျရအောင်…
သွားတိုက်ဆေး အထူးသဖြင့် Mint ပါတဲ့သွားတိုက်ဆေးတွေဟာ ဆားဝက်ခြံအတွက်ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းပါ။ Mint ပါတဲ့သွားတိုက်ဆေးဟာပိတ်နေတဲ့ချွေးပေါက်တွေကိုပွင့်စေပြီး ဘက်တီးရီယားတွေ ကိုသေစေနိုင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သွားတိုက်ဆေးအနည်းငယ်ကိုဆားဝက်ခြံရှိတဲ့နေရာအပေါ်ဘရက်ရှ်လေးနဲ့ညင်သာစွာပွတ်တိုက်ပေးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။
အုန်းဆီပါတဲ့ Lauric Acid ဟာ ပိုးမွှားတွေကိုသေစေနိုင်ပြီး အုန်းဆီဟာ အသားအရည်ကို အားဖြည့်ပေး ရုံသာမက ဆဲလ်အသေတွေကိုလဲဖယ်ရှားပေးတဲ့အတွက် ဆားဝက်ခြံဖယ်ရှားရာ မှာထိရောက်တဲ့နည်း လမ်းပါပဲ။
ပျားရည်ကိုဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းအနေနဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်ကသုံးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကောင်းကျိုးအလွန်ရှိတဲ့ အပြင် ဆေးဖက်လဲဝင်ပါတယ်။ပျားရည် သံပရာရည် နဲ့ သကြား တို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီး ဆားဝက်ခြံရှိ တဲ့နေရာ အပေါ်ပွတ်တိုက်ပေးပါက သိသိသာသာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ပျားရည်မှာ ဘက်တီရီးယားတွေကို သေစေ နိုင်ပြီး သံပရာကတော့ အသားအရည်ကိုကြည်လင်စေကာ သကြားကတော့ ဂျေးချွတ်တဲ့နေရာမှာ တ ကယ်ထိရောက်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းပါ။
ခရမ်းချဉ်သီးဟာလဲ ဘက်တီရီးယားတွေကိုသေစေနိုင်ပြီး ဆားဝက်ခြံတွေကိုခြောက်သွေ့စေပါတယ်။ သူ့မှာပါတဲ့ lycopene ဟာ ပျက်စီးနေတဲ့အသားအရည်ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီး အလယ်ကထက်ခြမ်းခွဲ၍သကြားအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ဆားဝက်ခြံရှိတဲ့နေရာ အပေါ်ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ တချို့ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ဓာတ်မတည့်သူတွေကတော့အသားအရည်ယားယံတာနီမြန်းတာမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်ဆက်မလုပ်သင့်ပါဘူး။
စတော်ဘယ်ရီမှာပါရှိတဲ့ အယ်ကာလီ ဟာအညစ်အကြေးတွေကိူပျော်ဝင်စေတဲ့သတ္တိရှိပြီး ချွေးပေါက်မှာ ပိတ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့အတွက် သဘာဝကပေးတဲ့ ဂျေးချွတ်ဆေးတမျိုးပါပဲ။
အထက်ပါအချက်တွေကိုအသုံးချပြီး ဆားဝက်ခြံ တွေပျောက်ကင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ ထပ်မဖြစ်စေရန် ရှောင်ရမဲ့အစားအစာတွေကတော့ ချောကလက်၊ဥအမျိုးမျိုး၊ထောပတ်သီး၊သရက်သီးမှည့် ၊ နို့နှင့်နို့ထွက် ပစ္စည်းများ၊ဆီကျော်အစားအစာများ စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Min Thuta | Health, Knowledge | December 9, 2019
Min Thuta | Health, Knowledge | December 1, 2019
ဒီတစ်ခေါက်မှာ ပြုံးလိုက်တိုင်းမှာ လှပတဲ့ အပြုံးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်စေမယ့် အကြောင်းအရာလေးတွေကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်…
Min Thuta | Knowledge | November 17, 2019
သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ငလျင်လှုပ်ပြီဆိုရင် ဘယ်လိုနေထိုင်သင့်တယ် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်ဆိုတာကို မိတ်ဆွေတို့အတွက် ဝေမျှပေးသွားချင်ပါတယ်။
Min Thuta | Health | November 17, 2019
မိတ်ဆွေ သင့်မှာ အသားအရည် နဲ့ အရေပြား နဲ့ပက်သက်တဲ့ပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရပါက ဖြေရှင်းပေးဖို့ နည်းလမ်းအချို့ကိုမျှဝေပေးလိုပါတယ်။ ပြုလုပ်ရတာလွယ်ကူတဲ့အပြင် လူတိုင်းလုပ်နိုင်တဲ့နည်း လမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Min Thuta | Food, Knowledge | November 7, 2019
သင်ဟာ Fast Food တွေစားရတာနှစ်သက်သူလား? ဒါဆိုရင်တော့ သိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေရှိတယ်နော်…
Min Thuta | entertainment | November 5, 2019
အားလပ်ရက်ရှည်တွေ ရှိတဲ့ နိုဝင်ဘာလမှာ Beach Trip ထွက်ဖို့ စိတ်ကူးရှိတဲ့သူတွေဆိုရင် ဒီအကြောင်းအရာကို ဖတ်သင့်ပါတယ်။ ဖော်ပြပေးသွားမှာကတော့ Beach Trip သွားရင် မဖြစ်မနေယူသွားသင့်တဲ့ အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ…ဒါက
Min Thuta | Health, Knowledge | October 30, 2019
ယခုလို အပူအောင်းတတ်တဲ့ အချိန်ကာလမှာ ရေကိုသေချာ သောက်ပေးခြင်းက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပါတယ်။ ရေအသက်တစ်မနက်ဆိုတဲ့အတိုင်းသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရေမသောက်ပဲမရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။ အသက်ရှည်ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့နဲ့ နေ့စဉ်တက်ကြွလန်း ဆန်းနေဖို့အတွက် ရေများများသောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
All times are GMT 6.5. The time now is 8:53 am.